Dowladda Mareykanka oo farriin u dirtay Farmaajo iyo Rooble
Waaxda Arrimaha Dibedda Mareykanka ayaa ka digtay in khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu adkeyn karo hanaanka doorashada ee dalka ka socda.
War-saxaafadeed ay Waaxda soo saartay ayaa lagu yiri “Iskaashiga hogaamiyayaasha Soomaalida, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble – wuxuu muhiim u yahay in la xaqiijyo in dalka uu si dhaqso ah usoo dhameeyo hanaanka doorashada ee socda. Khilaafka hadda u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Rooble wuxuu halis u yahay inuu adkeeyo hanaankan, waxaana loo baahan yahay in loo xaliyo si deg deg oo nabad ah.”
War-saxaafadeedka dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada doorashada uu sare u qaadi karto suurta-galnimada ah inay rabshado ka dhacaan dalka, fursanda ay siineyso kooxda Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee xagjiriinta ah.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble inay ka fogaadaan qoraallada ay soo saaraan ee warbaahinta lasoo mariyo iyo ficillad kale, ayna khilaafyadooda ku aadan xilal magacaabista ku xaliyaan hab nabdoon.
“Doorashooyinka oo si deg deg ah loo soo dhammeeyo waxay gacan ka gaysan doonaan horumarinta ajendaha ka hor-tagga argagixisanimada Soomaaliya, waxayna dowladda cusub ee Soomaaliya siin doonaan fursad ay wax uga qabato baahida shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeed ma mudna wax intaas ka yar,” ayaa lagu yiri qoraalka.